Umaki: kugqekeziwe | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Novemba 30, 2018 NgoMsombuluko, Juni 17, 2019 Douglas Karr
Lapho insizakalo entsha ingena emakethe engifuna ukuyihlola, ngivame ukubhalisa bese ngiyivivinya. Ezingxenyeni eziningi, ingxenye ye-onboarding ukukhomba isizinda esiphansi kuseva yabo ukuze ukwazi ukusebenzisa ipulatifomu kusizinda sakho esingezansi. Kuyo yonke le minyaka, ngingeze inqwaba yama-subdomains akhomba kuzinsizakalo ezahlukahlukene. Uma ngilahla insiza, bengivame ukungazihluphi nangokuhlanza
ULwesibili, April 27, 2010 NgoLwesithathu, Novemba 5, 2014 Douglas Karr
Umngani wami omuhle usanda kubanjwa ibhulogi lakhe le-WordPress. Kwakuwukuhlasela okunonya okungaba nomthelela ezingeni lakhe lokusesha futhi, nomfutho wakhe ezimotweni. Kungezinye zezizathu zokuthi kungani ngeluleka izinkampani ezinkulu ukuthi zisebenzise ipulatifomu yokubloga yenkampani efana neCompendium - lapho kukhona iqembu lokuqapha elikufunayo. (Ukudalulwa: Ngingumninimasheya) Izinkampani aziqondi ukuthi kungani zingakhokhela ipulatifomu
Lo ngumbuzo ongxoxwa kakhulu kunamazwana. Okuhlangenwe nakho kwami ​​ngokubhuloga ukuthi ukungaguquguquki kuyikho konke. Uma abafundi bakho belindele ukuba nokuqukethwe okusha nsuku zonke, bazobuyela kusayithi lakho nsuku zonke ukuthola lokho okuqukethwe. Umbuzo omuhle ukuthi: Zingaki kangaki izivakashi ezizobuyela kuwebhusayithi yakho zihlole okuqukethwe okusha ngaphambi kokuba ziyeke ukubuya? Kade ngenza ukuhlolwa okuthile